ऐठन | News Polar
मन्दिरा मधुश्री पुष २३, २०७८, शुक्रबार
मैले तँलाई जन्म दिए पनि सुरक्षित भविष्य दिन सकिनँ छोरी....
शुरुमा त देवराजलाई आफ्नै पत्नी गीताको छेउमा पर्न पनि संकोच लागिरहेको थियो । पटक्कै पनि आँट आएको थिएन ।
चकमन्न रातमा देवले जवान नारी आफू समीप देख्दा भित्रैदेखि अलिक कसिलो भएर आएको महसुस गरे । धेरै पछि उनको शरीर आज यसरी कस्सिएको थियो ।
चाउरी पर्न लागेका हातले सेती मकैको घोगाजस्तै गीताका जिउमा सुम्सुम्याए देवले । संकोचले बाबरी झार भइन् गीता । उनको अनुहारबाट रगत चुहिएला जस्तै भएको थियो ।
देवले अत्यन्तै उत्साहका साथ आफ्नो कलेटी परेको ओठ गीताको रसिलो ओठमाथि यसो के राखेका थिए दुई महिना अघिमात्र लगाएका उनका मथिल्लो पटि्टका चारवटा दाँत पो फुत्त फुत्किए ।
हतार हतार उनले आफ्नो मुख अलग्याएर दाँत मिलाए । गीताले नदेखेजस्तै गरिदिइन् ।
जीवनको उत्तरार्धमा पुगे पनि निकै उन्माद भरिएको थियो देवेलाई । तर अहँ ! सुगरले गलाएको शरीरले पटक्कै पनि साथ दिएन उनलाई । शारीरिक शक्ति ओह्रालो लागेपछि कामशक्ति पनि कता भाग्यो पत्तै पाएनन् ।
युरिक एसिडले बन्धक बनाएका हात खुट्टा र कम्मरको जोर्नी पनि करकरी भयो । शक्ति सन्तुलन धराशायी हुँदै गएपछि शरीर सन्तुलन पनि लथालिङ्ग भयो । ओच्छ्यानको अर्काेपट्टि थचारिएर हर्‍याक–हर्‍याक गर्न थाले उनी । दम बढेर आरनको खलाँतीजस्तै भयो छाती ।
गीताका लागि देवेसँगको प्रणय क्रिडा रहर अनि आवस्यकता दुवै थियो । उनका लागि पहिलो अनुभव थियो पुरुष स्पर्शको । नयाँ जीवन शुरुवातको पहिलो रात्रि । तन र मन मिलन हुने सुहागरात । त्यसैले त उत्सुकता र उत्साहपुर्वक निर्धक्क भएर स्वतन्त्र छोडिदिएकी थिइन् आफ्नो शरीरलाई गीताले । अब भने उनीसँग एउटा अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा प्रमाणित प्रमाणपत्र थिए देवे । सामाजिक रीतिरिवाज र संस्कार द्वारा प्रमाणित पुरुष । त्यसैले त उनी छचल्केर छताछुल्ल भएर पोखिएकी थिइन् ।
तर जब उनले देवेलाई निरीह अवस्थामा देखिन् तब जसरी पोखिएकी थिइन्, त्यसैगरी कक्रक्क भएर जमिन् । हिउँफूल भएर जमिन् । स्वाद विहीन् । रंग विहीन् अनि ताप विहीन् । चीसो..... भएर ।
टीठलाग्दो पाराले हेरिन् गीताले आफ्ना नव–विवाहित पतितिर । अहँ ! आँखा जुधाउन सकेनन् देवेले । हीनताबोध र आत्मग्लानी थोरै पोतियो उनको अनुहारमा । ‘आफू पूर्ण रुपमा पुरुषै छु’ भन्ने भ्रमको गगनचुम्बी गल्र्यामगुर्लुम्म भएर ढलेको थियो उनको ।
हुन त गीताको पनि एघार वर्षको उमेरमा विधिवत विवाह भएको थियो । तर व्यवहारिक रूपमा उनी कुमारी वा कन्ये नै थिईन् । किनभने उनको विवाहित लोग्नेले उनको कुमारीत्व छेदन गर्ने उमेर नै नभोगि अनन्तमा लीन भएको थियो । उनलाई बाल विधवा बनाएर ।
देवेकि दोस्री दुलही भएर भित्रेकि गीताले सुनेको, बुझेको, कुरेको सुहागरात थियो त्यो । त्यसैले त उनी महशुस गर्न चाहन्थिन् सुहागरातको । पुरुष स्पर्शको । पौरुषत्वको । अनि कुमारीत्व छेदनको ।
जीवनको लगभग आधा उमेर बिताइसकेकी गीता पूर्णरुपमा ‘नारी’ भएको महसुस गर्न चाहन्थिन् तर अहँ उनको यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन्, देवेले ।
अतृप्त आँखाले गीताले आफूतिर टीठाएर हेरेको देखेर देवेले भने, “मलाई माफ गर है गीता ! शरीरले नै साथ नदिएपछि मनले मात्र हुँदो रहेनछ त ..। अब आइन्दा भने यस्तो हुने छैन । पक्का...।”
आस्वासन जति गुलियो भएपनि सारै पत्यारिलो लागेन गीतालाई । देखिसकेकी थिइन् उनले देवेको असलियत ।
देवेले त वैंश चढ्दादेखि लिएर उमेरले नेटो नकाटुन्जेल दुई चारवटी आइमाइको फरियाको फेर समाइसकेका थिए । चौबन्दीका तुना तानीसकेका थिए । सत्र अठारको लर्के वैंशमा नै गोठालो जाँदा तामाङ जेठोकी छोरीलाई समातेर पहिलोचोटि आफ्नो यौवनको उद्घाटन् गरेका थिए । बीस नलाग्दै बिहे गरेर भित्राईसकेको थिए दुलही काइँलीलाई ।
नेपालीको औषत आयु भोगिसकेका देवेले काइँली सुत्केरी हुँदा र पर हुँदा काम गर्ने केटी नीरेलाई पनि अँध्यारोमा कैयौँपटक छामेका थिए । बाँचुन्जेलसम्म नै सँगै थिइन् उनकी पत्नी पनि । तर गीताले भने पहिलोपटक मात्रै पुरुषको तातोे स्पर्श महसुस गर्दै थिइन् चालिस वर्षको उमेरमा । तर अहँ पुरुषको अनुभूति अधुरै रह्यो उनको ।
दुलही भएर भित्रिएको भोलिपल्ट नै धेरै दिनजस्तै भएको थियो गितालाई । लोग्ने मान्छेको बिहे गर्ने उमेर कहिल्यै पनि जाँदो रहेनछ । आइमाईको भाग्य पनि कहाँ पुगेर कतिखेर र कोसँग ठोकिन्छ त्यो पनि त थाहा हुँदोरहेनछ । यस्तै लाग्यो गीतालाई ।
कस्तो बिडम्बना । जन्मिएर हुर्किएर आधा जीवन बिताएको चाहिँ मेरो घर हैन तर जहाँ म भर्खर मात्र पस्दैछु त्योचाहिँ आफ्नो घर ? सबै अपरिचितसँग नयाँ साइनो गाँसिदै मात्रै छ, तीचाहिँ आफ्ना ? धेरै प्रश्न सोच्न बाध्य गरायो गीतालाई नया जीवनले ।
जम्मा एक दिन मात्र बिताएको कोठा त्यति नै असहज लागिरहेको थियो गीतालाई जति असहज लागेको थियो आफूसँग बिहे गरेको बूढो लोग्ने र त्यस घरका प्रत्येक व्यक्तिसङ जोडिएको सम्बन्ध र व्यक्तिले लगाउने साइनोहरु ।
बिहे भएर भर्खर पत्नी मात्र भएकी उनले त्यस घरका मान्छेसँग गासिएका साइनो र सम्बन्धले पिरोलिरहेको थियो । आफूभन्दा बुढो व्यक्तिलाई छोरा । आफूभन्दा ठूला आइमाइलाई छोरी र बुहारी । सानालाई नातिनातिनी । ओहो ! कति असामान्य साइनो ।
हिजोसम्म उनी अविवाहित हुँदा दिदी, बहिनी र छोरीका तीनवटा साइनोमा मात्र सिमित थिइन् । तर बाबु समानको देवे अंकलकी पत्नी भएर भित्रिएकी छन् गीता । मनले रोजेको र माया गरेको मान्छेको ‘आमा’ साइनोमा गाँसिएर । लोग्ने भनाउँदाको एक चिम्टी सिन्दुर र एक लुंग पोतेसँगै एकैचोटि थुप्रै साइनो र सम्बन्धहररूमा विभाजित हुन पुगिन् गीता ।
जीवनमा आएको अपत्यारिलो उतार चढावलाई नियालिरहेकी थिइन् उनी एकान्तमा । तर्कना गरेर बसिरहेको बेला ढोकाको पर्दा उचालेर एउटी सानी केटीले आफूतिर चिहाइरहेको देखेर हाँसिन् । ऊ पनि जम्मा आफूसँग भएका छ सातवटा सबै दाँत देखाएर हाँसी । गीताले भित्र आउन इशारा गरिन् । गीताको हातको इशारालाई पच्छ्याउँदै डराउँदै गई फूच्ची ।
“हजुरआमा ! तपाइँ किन यहाँ हजुरबुबासँग सुतेको ? उता टि.भि. कोठामा सुतेको भए पनि त हुन्थ्यो नि ।
पुरुष स्पर्श पनि राम्ररी नपाएकी गीतालाई ‘हजुरआमा’ शब्दले झनै चसक्क बिझायो ।मलाई कथा सुन्न कस्तो मन थियो "
केही जवाफ नै भेटिनन् गीताले फुच्चीलाई दिने ।
" तपाइँले हाम्रो हजुरबासँग किन बिहे गरेको ?” डराउँदै सोधी फूच्चीले ।
प्रश्न सजिलो सोधेकी थिई फूच्चीले । तर उत्तर न त गीताले बुझाउन सक्थिन् न त फूच्चीले नै बुझ्दथी । कि, किन उनले उसको हजुरबुबासँग बिहे गरेको भनेर ।
किंकर्तब्यबिमुढ भइन् गीता । कुनै उत्तर नपाएपछि नानी लुसुक्क निस्किई कोठाबाट ।
बिहेको त्यति ठूलो उत्सव वा कार्यक्रम पनि भएन । न त ठूलो भीड । न त धेरै मान्छेहरुको जमघट नै । हुन पनि यस्तो खालको बिहेमा केको उत्सव र जमघट र । बूढो मान्छेको त्यो पनि अनमेल विवाह ।
केही चहलपहल र दुइचार जना आफन्त मात्रै थिए घरमा ।
“अब त तिम्रा माइती पनि कति खुकुला र खुसी भए होलान् है तिमीलाई अन्माए पछि त..।” एकजना आफन्त बृद्धाले प्वाक्क भनिन् ।
गीता झसँग भइन् । साच्चिकै मेरा माइती खुसी भए कि दुःखी ? आफैँभित्र प्रश्न तेर्सियो ।
मर्ने बेलाकि आमाको नातिनी कन्यादान गर्ने घिडघिडो पूरा गर्न खर्दार बलराज पण्डितले एघार वर्षे नाबालक छोरीको बिहे गरिदिएका थिए । तर जग्गेको आगो मात्र तापेकी छोरी गीता दुलहाको घर नै नगई एक वर्षमै विधवा भइन् । माइतीघर छोडनु परेन गीतालाई ।
बि.ए. पास गरेर गाउँको बिद्यालयको शिक्षिका बनिन् गीता । बिर्सीसकेका थिए बलराजले गीताको बिगतलाई । छोरीको पढाइ, रुप र जागिरको त्रीवेणीले गर्दा उनी नाङलो जत्रो छाती बनाएर हिँड्थे ।
गीताका लागि धेरै ठाउँबाट कुटुम्बको लाइन लाग्न थाल्यो । सबैले मन पराउँथे । कुरा पनि मिल्थ्यो । तर अन्तिममा के हुन्थ्यो कुन्नि, कोही पनि फर्केर आउन्नथे । गीता पनि घरमा मान्छे आउँदा पारिजात भएर फक्रिन्थिन तर पछि त्यत्तिकै जाँदा पारिजात नै भएर ओइलाउँथिन पनि ।
उनको ओर्लँदो वैँश र उमेर कहिलेकाहीँ उनलाई स्वनिर्णय गर्न घच्घच्याउँथ्यो पनि । सँगसँगै समाज, दायित्व, पद र बाबुको मान–सम्मान, मर्यादा, इज्जत, उनका अगाडि ठिंग भएर उभिन्थे । मरिच भएर चाउरिनुपर्थ्याे सँधै । चीसा रातहरु चीसै मन चीसै तन पारेर कचपल्टिरहन्थे ।
जुनसुकै कुराको पनि एउटा उपयुक्त समय र अवधीमा मात्र त्यसको महत्व रहन्छ । समय गएपछि महत्वहीन । त्यस्तै महत्वहीन हुँदै गइन् गीता । पहिला सबैको नजरमा पर्ने उनी बिस्तारै सबैबाट ओझेल पर्दै गइन् । उनले हात समाएर स्कूल लैजाने गरेका केटीहरु कतिले त नानी लिएर माइत आउँथे । केटाहरूको पनि दाह्रीजुँगा छिप्पिसकेको देख्दा आफूलाई अप्ठेरो महसुस गर्थिन् गीता । दिनानुदिन उनी पँधेरे गफ र भट्टि गफमा मात्र अटाउन थालिन् ।
अब त घरमा नयाँ मान्छे पनि उनको बिहेको लागि कुरा लिएर नभएर गाई, भैँसी, जग्गा खोज्ने कुरा लिएर आउने मात्र आउन थालेका थिए ।
एकदिन दिउँसो बलराज कतैबाट घरमा आए । आफ्नो कोठामा पस्दै थिए । छोराबुहारीको कोठाबाट गुनगुन आवाज आएको सुने । दुईजनाको वार्ता हुँदैथ्यो—
“किन आएकी थिइन अरे त बिन्दा दिदी ?”
“उही त हो नि, गीताको लागि केटाको कुरा लिएर आएकी ।”
“अनि कस्तो छ अरे त ?”
“आ जस्तोसुकै होस् नि मैले त खोजी नै गरिनँ । उनले त बताउँदैथिन् । मैले त्यो त हाम्रा नाता पो पर्छ भनेर धपाइदिएँ ।”
“ ठीक गर्‍यौ ..। कसै गरेपनि उम्कन दिनु हुन्न है गीतेलाई त यो घरबाट...।”
“कहाँ दिन्छु त ..! गीता त दुहुनो गाइ पो हो त ..। ऊ भएपछि काम गर्ने अरु पनि राख्नु पर्दैन । अनि खुरुखुरु पैसा पनि आउँछ । अब बुबाको शेख पछि त उसको सबै कमाइ हाम्रै त हो नि...।”
“अहिले त बूढाले के भन्लान भनेर पो सबै नमागेको त ...। पछि त सबै कहाँ छोडिन्छ र ?” त्यत्रो एक अंश पनि खर्लप्पै दिएका छन् बुढाले । त्यो कहाँ छोड्नु र त्यसै ।
“अहिलेसम्म आएका सबैलाई मैले त कसैलाई बिधुवा हो भनेर कसैलाई के भनेर भाँडिराखेकै छु । यसपाली पनि नाताको हो भनेर खेदाइदिएँ लौ जा.....।”
“ठीक गर्याै ..., तर अलिक चलाख भएर गर्नु नि । थाहा पाउलान नि बाबु छोरीले ।”
रिँगटा लाग्यो बलराजलाई यो सुन्दा । पहिले दाजुले बहिनीलाई कति माया गर्थ्यो । त्यो सम्झना भयो उनलाई । स्कूल जाँदा आउँदा उसको किताबको झोला मात्र नभएर बहिनीलाई नै बोकेर हिँड्थ्यो । आफ्नो भाग बहिनीलाई दिन्थ्यो सबै । एक्लै केही खाँदैनथ्यो । बहिनी रोइ भने सँगै रोएर बस्थ्यो ।
जीवन्त भएर बल्झिए पूर्व दृष्य र ऐठन भएर बिझायो उनलाई ।
रातभर बलराजलाई निन्द्रा परेन । कोल्टो फेरिरहे । सुस्केरा हालिरहे । बारम्बार उनलाई छोरीको उजाडिएको सिउँदो मात्र हैन डडेलो लागेको भविष्यले सताइरह्यो । पछि गीताको जीवनमा आइपर्ने संभावित परिदृष्यहरू झल्याकझुलुक भइरहे । छोरीलाई शिक्षा र संस्कार दिएपनि सुरक्षित भविष्य दिन नसकेकोमा दोषी ठानेर धिक्कारि रहे आफैँलाई ।
जमाना अठारौँ शताव्दीको पनि त थिएन । देवराजको छोरासँग झ्याँगिएको छोरीको प्रेमलाई गोरुबेचेको साइनोको तगारो नतेर्साएको भए पनि त हुने रहेछ ।
पछुताउ भयो उनलाई यतिखेर । त्यसबेला गरेको निणर्ण प्रति । देवे र उनी त साथी मात्र त थिए । एउटै आँतका दाजृभाइ त थिएनन् नि विवाह नै नचल्नेगरि त ।
आफ्नो अन्त्य पछि उनी आफ्नै घरलाई मानव वस्ती बीचमा रहेको मसानघाट लाग्यो एकाएक । छोरा बुहारीलाई जल्लाद र छोरीलाई काँचो दाउराको चीतामाथि जलिरहेको जिउँदो लाशको कल्पना गरे उनले एकाएक
एउटा अदृष्य गह्रौँ बोझ एकाएक झन गह्रुंगो हुँदै किचिरह्यो बलराजलाई । तर त्यो बोझ बिसाउने चौतारो दायाँबायाँ वा सामुन्ने कतै पनि देखेनन् उनले ।
“गीता ! मलाई माफ गर है छोरी ...।”
अनायाशै बलराजले गीतालाई अँगालो हालेर रोए । बाबुलाई दुधको गिलास लिएर कोठामा पुगेकी गीताले बाबुको यस्ता क्रियाकलाप देखेर छक्क परिन ।
“किन र बुबा ?”
“मैले तँलाई जन्म दिए पनि सुरक्षित भविष्य दिन सकिनँ छोरी....। देवेको छोरासँगको तेरो आत्मीय सम्बन्धलाई मैले तगारो तेर्साउनाले नै तेरो सुरक्षित भविष्य खोसियो ।”
“यो सबै मेरो भाग्यको दोष हो बुबा ।” गीताले भावुक भएर भनिन् ।
“भाग्य हैन छोरी कर्मको दोष । त्यसमा पनि तेरो होइन मेरो कर्मको दोष हो । मैले आफ्नो छोरीको भविष्य अँध्यारो पारेँ । तर अब म त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउने छैन । मेरो कुनै बन्धन र तगारो हुँदैन अब । आफूखुसी आफ्नो भविष्य सुरक्षित पार छोरी ।”
उनले छोराबुहारीको सबै कुरा छोरीलाई सुनाए ।
वास्तविकता थाहा पाएर किंकर्तव्यबिमुढ भइन गीता । उनले पनि महशुस गरिन् कि, “जुन घर आफूलाई सुरक्षाको कवच लाग्थ्यो । जीवनको मेरुदण्ड लाग्थ्यो त्यो त मानिसलार्ई जिउँदै जलाउने मसानघाट पो रहेछ ।”
मन मस्तिष्क शिथिल भएपछि शरीर पनि उठ्न सक्दो रहेनछ । यस्तै भयो गीतालाई पनि । सम्पूर्ण जाँगर मरेर गयो । उनलाई लाग्यो स्वरुप मात्रै भएको भएपनि लोग्ने मान्छेको जातको एउटा प्राणी चाहियो अब उनका लागि । जो आइमाइको जातलाई सुरक्षा कवच बन्न सक्छ । सत्य भन्दा, उनका लागि कम र अरुकै लागि चाहिँ बढी चाहियो त्यो लोग्नेमान्छे । त्यस मसानघाट बाट मुक्त हुन ।
चिने देखे जति सबैलाई सम्झिन् गिताले । अहँ आँखा अगाडि कोहीपनि उभिएनन् ।
अकस्मात दिमागको ऐनामा काले उभियो ।
"हैट !" त्यो नोकर .. ? " एक मनले भन्यो ।
"नोकर ,मालिक,धनी ,गरीब भेदै के भो र ? लगन, इमानदारी र सत्यको राजा छ ऊ ।" अर्को मनले भन्यो ।
“हे.... त्यो त सानो हो आफूभन्दा ।”
“सानो छ.....? सीप, विवेक र विचारको परिपक्वता छ उसमा । ।”
“तै पनि त आफैँले हुर्काएको भाइजस्तो......।”
“भाइजस्तो त हो, तर भाइ नै त हैन नि ......। अनि सानो होस कि ठूलो होस् नि तँलाई समाजमा सुरक्षाको कवच स्वरुप उसको नाम मात्र त चाहिएको हो नि ..। अनि आफूभन्दा धेरै पाकासँगचाहिँ बिहे गर्न हुने रे कम उमेरकासँगचाहिँ किन नहुने ?”
“हो त्यो त ..तर....।”
“त्यसो भए के त ...????”
अन्तरमनमा द्वन्द भइरह्यो उनको ।
गीताले झ्यालबाट हेरिन् । तल आँगनमा काले दाउरा चिरिरहेको थियो । एकक्षण अघिसम्म आँगनमा लडिरहेको मुढो कालेको बल, सीप र मेहनतले धूजा धूजा हुँदै गइरहेको थियो । उसमा पूर्ण इमान्दारिता, लगन र सीप पनि देखिन्थ्यो ।
अकस्मात कालेको ध्यान भंग गर्याे काले शब्दले । उसले टाउको उठाएर पल्याक पुलुक हेर्याे । झ्यालमा आधा जिउ निकालेकी गीतासँग ठोकिए आँखा ।
“यहाँ आइज त ।” गीताका शब्द र इशारा दुवै बुझ्यो कालेले । हातको बन्चरो भुइँमा पछारेर टोपीले पसिना पुच्छ्दै ऊ लम्कियो आवाज पच्छ्याउँदै ।
“सुन त अब तँलाई म नयाँ लुगा हालिदिन्छु नि ..।”
उसले गीतालाई पटक पटक भनेको थियो, उनको बिहेमा चाहिँ उसलाई नयाँ लुगा ,सर्ट , पाइन्ट चाहिन्छ भनेर ।
“हो र दिदी ? अब तपाइँले बिहे गर्ने हो....?”
“हो र त भनेको त ...।”
“दिदी ! मलाई त सर्ट पाइन्ट, जुत्ता अनि क्याप है ल ।”
“के को सर्ट पाइन्ट मात्रै नि । तँलाई त सुट नै हालिदिन्छु नि ..।”
“हो र ..?” खुसी र आश्चर्य दुवै झल्कियो उसको निर्दाेष मुहारमा ...।
ऊ आफ्नै भाइ भइदिएको भए र ऊ र गीताबीच मर्यादाको खाडल नभए ऊ गीतालाई जुरुक्क उचालेर ‘मेरी दिदी कति जाति’ भनेर फनफनी घुमाउँथ्यो होला आफूभित्रको खुसी देखाउन । तै पनि डिच्च हाँसेर त्यो खुसी ढकमक्क फूलाईरह्यो उसले ।
“तर तैँले मैले भनेको मान्नुपर्छ अनि मात्र किनिदिन्छु....।” गीताले अड्को थापिन् ।
पुलुकक गीतापटि फर्कियो प्रश्नसूचक दृष्टिले र हेरिरह्यो कालेले नबुझेको भावमा ।
“तैँले मसँग बिहे गर्नुपर्छ ...। गर्छस हैन ..?” नहाँसी भनिन् गीताले ।
“हे दिदी पनि ....! जे पायो त्यही भन्नुहुन्छ ...।”
रातो अनुहार बनाएर कपाल कन्याउँदै काले फुत्त बाहिर निस्केर गयो । गीताको अन्तर्मनको आवाजलाई मात्र एउटा ठट्टा ठान्यो र आफ्नो काममा दत्तचित्त भयो काले ।
दाजु भाउजूको वास्तविकता सुनेपछि गीताले जागीर खाने रहर पनि मारिदिइन् । कारण थाहा नपाएका दाजु भाउजूले मुखामुख गरे ।
बलराज झोक्राउँदै गए । गीताको पनि त अब त उमेरले नेटो काटेको थियो । सबै दोष आफ्नै भएको देखे उनले ।
अकस्मात उनका अभिन्न मित्र देवे आइपुगे उनको घरमा एकदिन । अति मिल्ने भएर एक अर्कालाई देवे र बलु भन्थे । खासमा नाम देवराज र बलराज भएपनि ।
बलु र देवे सँगसँगैका भएपनि सुगर, प्रेशर, दम, युरिक एसिड सबैले गर्दा अलिक बूढोजस्तो त देवे नै पो देखिएछ्न ।
" तँ त म भन्दा पनि बूढो पो देखिएछस त ए देवे ? भाउजूले खानै दिन्नन कि के हो ?" बलुले भने व्यंग्य गर !
"भए पो दिनु नि । भाउजूले जस्तै छोडेर गई मलाई एक्लै पारेर उसले पनि ।" तरक्क आँसु झार्दै भने देवेले ।
बलराजकी श्रीमती त झन् त उहिले नै गइसकेकी थिइन्
माफी मागे देवेसङ । आङ सुम्सुम्याएर सहानुभूति दिए बलुले सत्यता थाहा पाएपछि ।
"ऊ गएपछि पुर्णत: एक्लो भएँ बलु म त ।
हेर् ! आइमाइलाई बरु सजिलो रहेछ एकल जीवन बिताउन । घर परिवार र समाजमा बाँच्न तर लोग्ने मान्छेलाई त ज्यादै अप्ठेरो हुँदोरहेछ बाबै ।
तैँले कसरी पो काटिस् हौ एक्लै यत्रो जिन्दगी यतिका वर्ष ? " निरीह भावमा बोले देवे ।
अकस्मात् अध्यारो भयो बलुको पनि अनुहार ।
"धन्न ! यो गीते नहुँदी हो त मेरो पनि को हुन्थ्यो होला र ?" छोरीतिर हेर्दै बिस्तारै निस्कियो बलुको पनि मुखबाट ।
"केटाकेटी कता छन् त ? बलुले सोधे देवेलाई ।
"छोरीहरु आ-आफ्नै घर छन् । छोरा बुहारी सहर तिरै जागीरमा छन् । अब न त उनीहरू यता आएर बस्न सम्भव छ । न म नै उता गएर बस्न सक्छु ।" देवेले गुनासो पोखे ।
गीताले चिया बनाए ल्याईन् ।
सानैदेखि घुलमिल राम्रो थियो दुवै परिवारको । बाबु छोरीजस्तै गर्थे गीता र देवे एकअर्कालाई ।
तीनैजना वरिपरि बसेर चियाको चुस्की लिन थाले
निकैबेर आ आफ्नै पीडामा मौन भए दुवै
“साह्रै अप्ठेरो पो भएछ त अब त ......।” चियाको एक चुस्की लिएर टेबलमा राख्दै कुराको गेडो बलेले नै उप्काए ।
“भीरको चिण्डो जस्तै नै पो पारेर गई त पापीनिले ....।” श्रीमतीलाई सम्झेर तीतो पोखे देवेले पनि ।
“तातोपानी पनि खान नपाई मरिने भैयो अब त ...। बाह्रथरी रोग छ । केही गर्न सक्दिन आफू ।”
एकछिन पछि बोले भावुक भएर ,“अब हेर् न, काम गर्नै राखौँ भने पनि कस्तो राख्ने ? सानो केटाकेटी राखौँ भने केही जान्दैन । मेरो उसले हैन उसको मैले नै सह्यार गर्नु पर्ला । ठूलो केटा राखौँ, आजकलको जमानाको के विश्वास ? भएको सबै सिरिखुरि पारेर हिँड्न के बेर...। घरमा अरु कोही पनि छैनन् । आइमाई मान्छे राखौँ न त भन्दा पनि विविध कुराको सीमाले दिएन नाता नभएको मान्छे राख्न । अब बृद्धाश्रम जाउँ न त भन्दा पनि आफ्नो त्यत्रो सम्पत्ति छ । भर्खरै मात्र घर बनाएको छ । अब बृद्धाश्रममा टुहुरो जस्तो भएर के बस्नु ? के गरौँ लु तँ भन् त बलु ।”
एकछिन चकन्न भएपछि बलुले स्पष्ट भने, “अब बरु तँ बिहे गर् । तँ पनि एक्लो हुँदैनस् । स्वास्नीले जस्तो सह्यार गर्दैनन् अरु कसैले पनि । घर ब्यवहार पनि सम्हालिन्छ ।”
“धत् ! अब यो उमेराँ पनि ...? घरमा पनि दिनरात बिहे गर भनेर नै कचकच गरेर हैरान छ अब तँ पनि उहि कुरा ...?" के भन्छन् जोरीपारीले पनि ??” देवेले उचित मानेनन् साथीको सल्लाह ।
“के भो त ? ठिकै त भने नि । जोरीपारी कोहीले तँलाई सह्यार्न आउँछन् त ? बरु यसो गरीबकी छोरी, बूढीकन्या वा एकल महिला........।”
पूरा भएन उनको वाक्य । अकस्मात चसक्क भएर गीतातर्फ गयो उनको ध्यान र आँखा ।
गीताले पनि झस्कँदै बाबुसँग आँखा जुधाई । तीनै जनाले एक अर्कालाई पालैपालो हेरे । कसैका मुखबाट केही शब्द पनि फुत्केन । अप्रत्यासित रुपमा सबैको मुख रातो भयो ।
तीनैजना एउटै समस्याको घेरोमा जेलिएका थिए । यदि सम्झौता गर्ने हो भने तीनै जनाको समस्या सजिलै समाधान हुन सक्थ्यो ।
बलेलाई आफ्नो जीवनपछि छोरीको सुरक्षित भविष्यको निस्चिन्तता, गीतालाई एउटा नामको सुरक्षा कवच र त्यो मसानघाट बाट मुक्ती र देवेलाई एक भरपर्दाे स्वास्नीमान्छे, जस्ले निस्वार्थ र श्रद्धाका साथ सेवा सहयोग गर्छे पाइला पाइलामा ।
लर्बराएको स्वरमा बोले बलराज । अरु केही भन्न सकेनन् । कसरी भन्नु र बाबु समान मानेको र बाबु समान बूढोसँग बिहे गर छोरी भनेर ।
"बाबुले बूढेशकालको थाप्लोमा रहेकोे छोरीरूपि गरुँगो भारी देवेरूपि चौताराेमा बिसाउन खोज्दैछन्," यस्तै भाव पढिन् बाबुको आँखामा गीताले ।
उनले बाबुलाई हेरिन् । बाबुले देवेलाई हेरे । देवेले गीतालाई । सबैको आँखामा एक प्रकारको चीसो बाध्यता झल्किन्थ्यो ।
हुन त देवे बलेकोमा कुनै पनि उद्धेश्य राखेर आएका थिएनन् । यस्तो कुरा उठ्ला वा यस्तो अन्योलको स्थिति आइपर्ला भन्ने सोचेका पनि थिएनन् ।
छोराले हुरुक्क गरेर गीतालाई मन पराएको थियो । सबैथोक मिलेपनि देवेले छोरालाई भनेका थिए, “बलु र म त एउटै दाजु भाइजस्ता पो हौँ त ...। गीता त तेरी बहिनी जस्ती नै भई । अब दाजु बहिनीको विवाह कसरी गरिदिउँ तैँ भन् त ?”
उहिले यही निहुँमा बसाइँ हिँडेका थिए देवे पनि । आफ्नो थातथलो र अभिन्न मित्र बलुलाई छोडेर ।
छोरो धेरैदिनसम्म असामान्य अवस्थामा भएको कुरा झल्झलि भयो उनलाई अहिले ।
देवेलाई आफूले छोरीजस्तै मानेकी गीतालाई बुहारी स्विकार्न असम्भव लागेको उनको आत्माले आज स्विकार गर्न चाहेन गीतालाई पत्नी बनाउने कुरा पनि ।
बाध्याता र लाचारी भन्दा ठूलो स्थिति केही हुन्नरैछ जिन्दगीमा ।
सत्तरी टेक्न लागेका देवेले अप्रत्याशित रुपमा छोरीजस्ती गीतालाई दुलही बनाए अन्ततः ।
तीनै जनाका आँखा अपराधबाेधले ग्रस्त देखिए ।
समस्याको मोतिया बिन्दुबाट ग्रसित सबैले जीवनको अगाडिको दृष्यमात्र देखे । सुदुरको दृष्य अहँ कसैले पनि अनुमानै गरेनन् ।
एक महिना बितिसकेको थियो गीता देवेको जिवनमा आएको पनि । बूढै भएपनि पुरुष स्पर्शले रन्किएकी गीता सधैँ उस्तै गरि बिस्तारै चिसिँदै जान्थिन् ।
देवे गीताको स्पर्शमा नै सन्तुष्ट हुन खोज्थे भने गीता देवेको स्पर्शमा झन अधकल्चो हुन्थिन् ।
देवेको हीनताबोध झन झ्याँगिदै गयो । उनलाई थाहा छ उनले आफू पूर्ण पूरुष नै हुँ भन्ने आभाष दिलाउन सकेका थिएनन् गीतालाई ..। बारम्बार प्रयाश गर्दा पनि । देवेले आँखा झुकाउँदै उनैमाथी घोप्टिएर हीन भावमा भन्थे सधैँ, "गीते मलाई माफ गर....।”
देवेले त उनलाई चाहिने जस्तै वा खोजेजस्तै स्वास्नी भेटेका थिए तर गीताले दम र खोकीले कुहेको गन्हाउने स्वास बाहेक अन्य केही पनि महशुस गर्न सकिनन् लोग्नेको । `लोग्ने´महशुस गर्न सकिनन् लोग्नेको नाम जस्तै ।
"यो यौन भन्ने वस्तु पनि कति अप्ठेरो रैछ । आफैँमा सम्पूर्ण रुपमा परिपूर्ण भएपनि उपभोगको लागि अरु नै चाहिने । न त डाक्टरी औषधिले हुने न त धामी झाँक्रीको तन्त्रमन्त्रले नै । आजको बिज्ञानले योचाहिँ किन नसोचेको होला ? एउटा यस्तो औषधि बनाउन जुन औषधि यौन इच्छा जाग्दा एक चक्की खाने बित्तिकै मान्छे चरमानन्दमा पुगोस्.....। टाउको चट्कँदा सिटामोल खाएजस्तै ....।" कहिलेकाहीँ त गीता यस्तो पनि सोच्न थालेकी थिइन् ।
गीता दिनभरि देवे अंकलको सेवामा समर्पित हुन्थिन् । समयमा खाना । तातो चीसो । पानी, खाजा, औषधि सबैको समय तालिकामा हुन थाल्यो ।
जहाँ जाँदा पनि उनी चनाखो हुन्थिन् बच्चालाई जस्तै गोजिमा चकलेट हालेर हिँड्थिन् । कतिखेर बूढाको सुगर घटेर स्वात्त हुने हो भनेर वैकल्पिक उपायका लागि । जे होस्, उनले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य राम्ररी पुरा गरेकी थिइन् ।
देवेलाई लाग्यो, प्रतक्षमा गीताको र आफ्नो समस्या समाधान भए पनि उनीसँगको विवाहले परोक्ष रुपमा झन् ठूलो समस्या खडा गरिदिएको छ । गीताको यौनाधिकार हनन् भएको महसुस गरे उनले । गीतामाथि अन्याय मात्र हैन, अपराध नै गरेकोमा आत्माग्लानी भयो । आफैँलाई पापी हुँ भन्ठाने उनले । सँधै घोत्लेर सोचिरहन्थे देवे ।
“नयाँ ठाउँ, नयाँ मान्छे नयाँ सम्बन्ध भएर होला गीता अलिक असहज भइरहेकी छिन् । घरको नियास्रो लागेको जस्तो छ । केही दिनको लागि कालेलाई पठाइदिने पो हो कि ?” अनुरोधको भावमा खबर गरे एकदिन बलुलाई देवेले ।
देवेको निमन्त्रणा र बलुको आज्ञा मानेर काले उपस्थित भयो गीताका घरमा ।
"माइतीको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ" उखान जस्तै कालेलाई देख्दा गीतामा पनि स्फूर्ति जाग्यो । भीडमा एक्लै हराएको बेला परिचित आफन्त भेटेर खुसी हुँदा जस्तै देखिइन् गीता पनि ।
देवेको पुरुष स्पर्शले सँधै झैँ भुँग्रो भएर दनदनी हुन थालेकी थिइन् । एकदिन गीता अर्ध बेहोसीमा छटपटिरहेको बेला देवे कोठाबाट बाहिर निस्के र काले सुतेको ठाउँमा पुगे ।
“दिदी टाउको दुखेर निकै छटपटिरहेकी छिन् जा जा काले तँ गएर टाउको थिचिदे एकक्षण ।”
किंकर्तब्यबिमुढ भएर विस्फारित आँखाले हेर्‍यो कालेले देवेलाई ।
“जा बाबु । पानी पट्टी लगाइदे न एकैछिन ... ।” बढेको दम स्याँ–स्याँ गर्दै देवेले भने ।
आज्ञाकारी बालक झैँ आँखा मिच्दै काले बिरामी दिदी भए ठाउँमा गयो ।
आँखा चिम्लेर लामो लामो स्वास फेर्दै सुतिरहेकी थिइन् गीता । निधारमा बिस्तारै छाम्यो कालेले डराउँदै ।
आक्कल झुक्कल ठोक्किएर बाहेक कालेले एकान्तमा यसरी कहिल्यै छोएको थिएन गितालाई ।
अलग स्पर्श महशुस हुँदा तर्सेर पुलुक्क आँखा खोलिन् गीताले । एक्कासि कालेलाई देखेर आश्चर्यचकित परिन् ! अनि मनमनै कालेलाई देवेमा रुपान्तरण गरिन् । र पुनः बन्द गरिन् आँखा ।
गीता क्रमशः सेलाउँदै गइन् ।
उता देवेले उहिलेको कुरा सम्झे– "बिहे गरेको केही दिन पछि उनकी दुलही देख्दा लाहुरे भोटेले उनकी दुलहीमाथि आँखा गाड्दै, ‘कति राम्री ल्याएछौ हौ दुलही त’ भनेर एक आँखा झिम्काएको थियो जिस्केर । तर झण्डै दाँत खुस्काइदिएका थिए देवेले ।
झण्डै भाउन्न भएर ढलेका थिए देवे अहिले पनि । तर तुरुन्तै सम्हालिए । अनि तुलना गरे पहिलेको त्यो पच्चीस वर्षिय जोश र अहिलेको सत्तरी लागेको रोगी शरिर ।
देवेलाई रातभर ऐठन भइरह्यो । जिउ दुखेर हो कि, दम बढेर वा त एक्लै सुत्दा जिउ नतातेर हो कि रात भर ख्याँस–ख्याँस खोकि पनि लागिरह्यो ।
अबेरसम्म छट्पटिएका देवे बिहानखेर निदाएछन् । गीताले आरती गर्दा गुन्जिएको घण्टीको मधुर ध्वनीले सम्बन्ध बिच्छेद गरिदियो निन्द्रासँग ।
थोरै आत्मग्लानी र हीनताबोध भइरहेको थियो उनलाई । ‘गीताले पो के ठानी होली ..?’
अकस्मात गीताले गिलासमा दूध लिएर पसिन् कोठामा । उनले देखे, सँधै बुहारी झार झैँ हुने गीताको मुहारमा सूर्यमुखी फक्रिरहेको थियो ।
# ऐठन # मन्दिरा मधुश्री # कथा
प्रकाशित : पुष २३, २०७८, २०:४७:१०